Izindlela Ezi-6 Ezilula Zokuthuthukisa Umthelela Wakho Wokumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 31, i-2015 Douglas Karr
Kusekhona izinkampani laphaya ezilwa necebo nezinsizakusebenza ezidingekayo ukukhiqiza okuqukethwe okusebenzayo. Futhi eziningi zalezo zinkampani azikuboni ukubuya kotshalo-mali okungalethwa isu lokumaketha lokuqukethwe ngoba kungenzeka ziyeke ngokushesha noma zingakuqondi ngokugcwele okufanele zikubhale, zikubhale kanjani, nokuthi zikubhale kuphi.
Izibalo zifakazela ukuthi ukumaketha okuqukethwe kudale umehluko omkhulu ekuthuthukisweni nasekuthuthukisweni kwamabhizinisi embonini. Ukumaketha kokuqukethwe kungashintsha indlela amakhasimende abheka ngayo amabhizinisi, futhi ukukhanyisa ngale ndlela senze i-infographic enesihloko Ungaba Kanjani Uchwepheshe Kokumaketha Okuqukethwe.
Lokhu infographic kusuka I-Dot Com Infoway - Isikhungo Sokumaketha NgeDijithali ichaza izinzuzo zohlelo olukhulu lokumaketha okuqukethwe kanye nezindlela ezilula zokwenza isu lakho. Ngibone isikhala esingenalutho ku- Ukukhetha Isihloko uhlu lokuhlola - ngabe ngangeza ucwaningo lwamagama asemqoka embonini yakho ukukhomba izihloko, ukubuyekeza izihloko ezithandwayo kumasayithi encintisana nawo, ngaphezu kwezindaba zemboni ezandisa inani lezethameli zakho. Njengoba ngenza ngokwabelana ngale infographic - akudingeki ukuthi usebenze kusukela ekuqaleni - kwesinye isikhathi othile ushicilele okuqukethwe okubaluleke kakhulu kuzithameli zakho ongabelana ngakho.
Isigaba esiyinhloko sithi Izinto ezi-6 okufanele uzikhumbule ngenkathi udala nokuqukethwe kokumaketha. Ngiyakuthanda ukuthi basho ukumaketha ngoba izinkampani eziningi kakhulu zibhala okuqukethwe okulindelwe ukuthi abantu bazothutheleka kuyo… kepha kudinga umzamo omkhulu kunalokho! Nazi izindlela ezi-6 ezilula:
Sebenzisa izihloko zezindaba ezidonsa amehlo ukuze unake.
Abantu yizilwane ezibukwayo.
Dala okuqukethwe okukhulu.
Thola futhi ukhombe izithameli ezifanele.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweokuqukethwe ukumaketha umthelelaizinyathelo zokumaketha okuqukethweuchwepheshe
Icala nokuvikelwa kwesizukulwane sesidingo